Kudzokorora: The Chef and The Dish | A Couple for the Road
Chero pese patinenge tichifamba kune dzimwe nyika tinoita kuti tive nekuenzanisira kutengesa kwenharaunda uye zvekunakidza, kunyanya ndiro dzekudya. Asi kakawanda sei patinosvika pakuona uye kunzwisisa kuti ivo vakagadzirwa sei, kunyanya nemunhu anochera kupi? Zvakanaka, zvakanaka zvikuru! Tagara tichida kuziva nekuziva zvakawanda pamusoro pezvokudya zvatinakidzwa munyika yose, uye pakupedzisira kune nzira yekuita nayo - iwe pachako mukicheni yako!
Munguva pfupi yapfuura, takasangana nekambani ine basa rakasiyana-siyana rakadanwa rinonzi Chef neThe Dish - kambani inonyanya kuitika usiku hwemasikati uye zviitiko zvepati pane maunogamuchira rarama mazano ekubika kubva kunyanzvi chef. Chikamu chinotonhorera? Vafisi vanoshanda The Chef uye The Dish inonyanya kuzivikanwa, chaiyo yekudya, uye inouya kwauri inogara ne Skype kubva kunyika dzavo dzekumba!
Chiitiko chedu chakakosha chaive chaiye chaiye zvechokwadi - gore redu remakore gumi remuchato! Ndichitsvaga chimwe chinhu chakasiyana-siyana kuita, chimwe chinhu chakanga chakasiyana uye chinonakidza rudo, Tracy neni takasangana neChef uye The Dish, uye takawana nzira yakakwana yokupemberera zuva guru redu pamwechete!
Icho chirevo chiri nyore, asi chinonakidza - mupiki wemazano anonyanya kuzivikanwa mumagariro emunharaunda anouya kwauri ne Skype huripo kubva iyo nzvimbo. Mubiki anokupai mamiriro ekuma nyika yavo uye nzvimbo, uye zvokudya zvinobva kumusha wavo, vasati vakufambisa pane imwe nhanho, murayiridzo wekudzidzisa kubika chaiye, kudya kwechokwadi - nenzira iyo iyo vapi vanoziva kuti kudya kunonyanya kuita .
Kutanga naJenn Nicken, The Chef neThe Dish chimwe chinhu icho, kana takaziva, isu chete aiva kuti ndiedze - naTracy neni ini mumwe nomumwe tine mamiriro ekugadzira pashure pemakore ekushanda munhizha yekutengesa. Chiitiko chedu chakanga chiri, kutendeseka, kushamisa. Ichi chi the coolest uye chiitiko chinonakidza chatinacho munguva yakareba kwazvo, uye nzira kubva paChitatu 1 yose kuburikidza nokupedzwa kwekirasi yedu yakanga isina chinhu asi inonakidza.
Tichakupa ruregerero rwechokwadi, uye tinokuudza chaizvo izvo zvataive nazvo mukirasi yedu neThe Chef neThe Dish, uye nei tichifara kwazvo kukuudzai mose nezvebasa rino rakakura iro Jenn Nicken uye boka rake riri kupa!
Danho 1: Kurongwa
Paunotanga kusvika kuna Chef uye The Dish yekuti tenzi wako kubika kirasi, unoona zvingani Zvokudya zvekugadzirira zviripo zvekirasi yako - mune zvose kubva kuSouth American Cuisine neEuropean Spanish, kusvika kumaodzanyemba kweItaly uye kunyange Asia Classics. Munyika imwe neimwe sarudzo (nyika masere seyekunyora kwenyaya ino - uye kukura), kune zvikamu zviduku mukati mechikafu ichocho.
Somuenzaniso, kana iwe uchida kuva nekirasi pazvokudya zveItaly, uchakwanisa kusarudza kutsvaga kwekudya iwe waunodzidziswa kubika hupenyu - kusanganisira kutarisa paParigiigi Reggiano (iyo yatakasarudza), Raviolo, Sicilian, Milanese, uye mamwe maitiro akawanda mune imwe neimwe.
Kushanda naJenn neboka rake, iwe uchasarudza nzira yako uye uwane nguva yakagamuchirwa kuti ubate chikafu chako chekubika. Usati uri weklasi chaiyo, zvakadaro, Chef neThe Dish inoita kuti uve nechokwadi chokuti wakanyatsogadzirira nekukutumira iwe shanduro yakakwana yezvokudya, ruzivo pamusoro pomukuru uyo ​​ari kutungamira kirasi yako, uyewo zvirongwa zvepamberi yekugadzirira-kuburikidza yekicheni yako, zvigadzirwa, uye yekuisa-up zvinoda.
Icho chinotitungamirira kuChitatu 2 ...
Danho 2: The Prep Session
Jenn anouya kwauri, ararama ne Skype, kuti akurukure chimiro chetambo rako, anokupa ruzivo rwemashoko pamusoro pemupi uyo ari kutungamira nzira yako, uye anoita kuti uve nechokwadi kuti iwe ungaisa sei kombiyuta yako kuitira zvakanakisisa ruzivo. Mukuwedzera, anokutungamirira kuburikidza nenzwisiso yakazara yezvinyorwa zvezvokudya, izvo zvauchave uchibika, uye kunzwisisa kwezvinhu zvose zvichange zvichidiwa kuburikidza nedzidzo.
Mukuwedzera pane danho rinobatsira, Jenn anonyanya kunakidza kuti ashande pamwe, ruzivo, simba uye anobatsira! Ichi chaive chiito chikuru mukati mekuita kwedu chakatibatsira kuti tipinde muhupenyu hwedu chaiyo nekutenda kuti taizove nenguva yakawanda, uye kuwana zvakanyanya kubva pane zvakaitika!
Mutungamiriri wekirasi yedu yaiva Chef Paola Martinenghi, uyo akauya kwatiri achigara kubva kumba kwake muMilan, Italy! Mutungamiriri wePaola's resume yakazara uye inonakidza, imwe nyanzvi yekugadzira mimwe mitambo yaMorei yaipedza kudzidza mukirasi yeAlma yakakurumbira muParma, Italy. Mukuwedzera, iye ane 9FoodPR, sangano rakazvitsaurira kuwana vakanakisisa vanoita gastronomic mu Itari kuchengetedza uye kukurudzira nzira dzavo dzetsika dzekugadzira.
Kana uchinge watorwa uye wakagadzirira kuenda kune imwe danho rimwe chete rakasara ...
Danho 3: Nguva yekuKheka!
Pamberi pekirasi yako, unoda kupedza nguva shomanana uchingotora zvigadzirwa zvako, midziyo, ndiro, uye kicheni zvakagadzirirwa. Kuita kurongeka kunoita kuti uwane ruzivo rwakasununguka, uye kunowedzera zvikuru kufara kwako kwechiitiko!
Chef Paola akanga achidzidzisa kuti tigadzire kudya kwemafundo matatu, ose aine imwe yezvigadzirwa zvinotsanangura chokwadi cheku Italiya kubika - Parmigiano Reggiano. Nokuda kwekunakidza, akatitungamirira kuburikidza nekugadzirira kwekanakisa bruschetta, kuzoteverwa ne carbinara chaiyo, uye yakakonzera pear ne ricotta ye dessert.
Iwe haungadi Tenda iyo inonaka sei ichi, uye zvinonakidza kuita!
Chokutanga, Chef Paola akatitanga nekugadzirira mapeari erenje ...
... uyewo musanganiswa we ricotta kuti upedzise pane imwe nguva gare gare.
Kamwe imwe nheyo yekateti yedu yakagadzirwa, takatanga kutengesa bruschetta yedu asi tichicheka chingwa cheItaly (taigona kungowana chiFrench chete, asi nerufaro rakange rakakura zvakakwana kuti riite basa rayo!)
Uye chii chinonzi bruschetta chisina kukanganiswa, yakagadzirwa tomate?
Kana izvi zvichitemerwa nezvimwe zvinoshandiswa zvakakosha kune bruschetta huru, takaenderera mberi kunogadzirira carbonara yedu apo bruschetta yakabikwa.
Ichokwadi, hapana carbonara yakarurama isina chokwadi, pastaiti yakaitwa muItaly ...
Uye, kake panchetta ...
Ipapo Chef Paola akatidzidzisa zvakavanzika zvekuti tingauyisa sei pamwe chete kuti tive neklassara, tsika, uye inotapira carbonara!
Zvino, inguva yekuunza nayo yose pamwe chete, kutanga ne bruschetta ...
Zvadaro kupedzisa kubva peered pear dessert ...
Mugumisiro? A matatu-chikoro masterpiece!
Chiitiko chedu neThe Chef neThe Dish, Chef Paola, uye nechechi yaJenn Nicken chaive chiitiko chemhando-chatinotarisira vose uyo anoda chikafu uye nguva yakanaka ichawana.
Chigumisiro chekudya chaive chimwe chezvinhu zvakanakisisa zvatave tamboravira, mutsara chaiyo weItaly yakakonzera izvo zvatakange tava nazvo patinenge tichifamba ikoko - zvakagadzirwa zvakanaka mukicheni yedu! Isu zvikuru inokurudzira Chef neDish - nekuda kwezvokudya zvose zvinokutaurirai - zvemasikati-masikati, kudya kwemanheru neshamwari, chiitiko chamangwana, kana kungoita usiku hunofadza! Kana iwe usingakwanise kuenda kune zvekudya iwe unorota, tora chef achiendesa kupinda mukicheni yako!
Category: Vakaroorana Kufamba, Food uye Drink, Italian, Itari, Most Popular, Recipes, Reviews Tags: chef, kubika, chikafu, chikafu chokudya, Itari
← Ndekupi Kwokugara Mu Santorini
Ndekupi Kwokugara MuAmsterdam →